राष्ट्रपति भण्डारीकी सम्धिनीले केन्द्रीय सदस्यमा ल्याएको यस्तो नतिजाले सबै चकित — Imandarmedia.com
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा वर्तमान केन्द्रीय सदस्य किरण यादव पराजित भएकी छन्। १४ औं महाधिवेशनमा मधेसी महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेकी उनी पराजित भएकी हुन्।
पूर्वराष्ट्रपति तथा काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री रामवरण यादवकी भतिजी समेत रहेकी किरण ४ जना मधेसी तर्फको महिला केन्द्रीय सदस्यमा अटाउन सकिनन्। उनीराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकि नातेदार हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकि सम्धिनी समेत रहेकी उनी आगामी ४ वर्ष काँग्रेस केन्द्रीय समिति बाहिर रहने भएकी छन्। चार जना महिलामा शेखर कोइराला प्यानलबाट उनको मात्र उम्मेदवारी परेपनि किरण पराजित भइन्।
शेरबहादुर देउवा समूहकी मुक्ताकुमारी यादव ३ हजार ९ सय ६९ मत ल्याएर पहिलो स्थानमा निर्वाचित भएकी छन्। यस्तै मिनाक्षी झा ३ हजार १२, मन्जुकुमारी यादव २ हजार ८ सय ८३ र नागिना यादव २ हजार ८ सय ४६ मत ल्याएर विजयी भएकी छन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मङ्सिर २७ गते सोमबार भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुधबारसम्म आइसक्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ।
पदाधिकारीसहित १३४ पदका लागि भएको निर्वाचनको हालसम्म ६३ पदको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। जसमा १३ जना पदाधिकारीको पनि मतपरिणाम आइसकेको छ।
हाल वाग्मती, कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतगणना भइरहेको छ। यी प्रदेशको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेकाले आजै बाँकी रहेको थारु, खसआर्य, मुस्लिम, जनजातिलगायत क्लस्टरको मतगणना पनि सुरु गर्न लागिएको छ।
यो कुराको जानकारी समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। अहिले विभिन्न क्लस्टरका ७१ केन्द्रीय सदस्यको मतगणना पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भइरहेको छ।
बुधबारसम्म १३४ पदकै अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी गणना भइरहेको पनि उनले सुनाए। विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा पार्टीभित्र सहमति नजुटेकाले मत परिणाम सार्वजनिक गर्न एक साताभन्दा लामो समय लागेको हो।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसको ‘मधेसी खुल्ला’तर्फ उद्योगपति विनोद चौधरी दोस्रो लोकप्रिय मत ल्याएर विजयी भएका छन्। काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा मधेसी खुल्लातर्फ खसेको ४६७६ मच मध्ये चौधरीले २२०६ मत ल्याएका छन्।
अजय चौरसियाले २५२२ मत ल्याएर पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्। मधेसी खुल्ला ५ केन्द्रीय सदस्यका लागि २३ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। चौधरीले २१ जनलाई उछिनेर दोस्रो लोकप्रिय मत प्याएर केन्द्रीय सदस्य भएका छन्।
तेस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँचदलीय गठवन्धनलाई ‘अलच्छिन’ संज्ञा दिएका छन्। सरकारमा अलच्छिन पसेकाले देशको ढुकुटी रित्तिएको उनले टिप्पणी गरे।
राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हु्न्। बैंकहरु अहिले पैसा नभएको विषय उप्काउँदै उनले सत्तारुढ दलहरुको आलोचना गरेका थिए।
ओलीले भने, ‘६ महिनायतादेखि बैकहरुमा पैसा छैन। जानुभयो भने पैसा पाइँदैन, चाहे जेसुकै धरौटी राख्नुस। यात्रोविधि आयोजना काटिएको छ। सबै निर्दिष्ट बजेट छ।
तर, पनि खर्च गर्न नसकिने भनेर किन आयोजना काटिन्छ ? उनले थपे, मान्छेहहरु कहिलेकाहीँ भन्छन् नि, अलच्छिना पस्यो भनेर। त्यस्तो भयो। पाँच वटा अलच्छिना एकैचोटि पसेपछि के होला ?
ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परामादेश दिने सर्वोच्च अदालतप्रति पनि आक्रोश पोखेका थिए। असार २९ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराउनै पर्ने परामादेश किन दिनुपरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत संवैधानिक बाटोबाट कान्लातिर हाम फालेर गए हुन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको संसदलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, सपथ भयो, संसदलाई थाहा छैन।